SENDIKAN’NY MPIASA : « Aza atao fitaovana hanaovana praopangady ny mpiasam-panjakana »
Lasa sorona amin’ny raharaham-pirenena matetika ireo mpiasam-panjakana. Izy ireo izay tsy maintsy manaraka ny baikon’izay mpitondra eo amin’ny fitondrana satria tsy te ho very asa. 13 avril 2018
Manaporofo izany ny fanerena azy ireo tsy maintsy hanatrika ireo karazan-danonana ataon’ny mpitondra mba hanamaro isa ireo mpanotrona.
Manoloana izany dia nisy ny fanambaràna nataon’ny firaisankinan’ny sendikan’ny mpiasa na Ssm. Mahatsiaro tanteraka izy ireo fa lasa fitaovana politika ny mpiasam-panjakana. Fantatra fa asain’ny mpitondra hiakatra eto Antananarivo avokoa amin’izao ireo lehiben’ny Csb sy ny lehiben’ny Zap manerana ny nosy.
Tsy fantatra mazava izay anton’ny fiantsoana fa ny hany tokana azo antoka dia ny fikasan’ny fitondram-panjakana hanipy teny miendrika fampielezan-kevitra ho azy ireo sahady. Toherin’ny firaisankinan’ny sendikan’ny mpiasa izay mety ho endrika mety ho fanaovana sorona ny mpiasam-panjakana ao anatin’ny fampielezan-kevitra izay. Ankoatr’izay, nisy teboka maromaro ihany koa nivoitra nandritra ity fanambaràna nataon’ny Ssm ity. Anisany nitondran’izy ireo fanehoan-kevitra ihany koa ny mahakasika ilay lalàm-pifidianana.
Miandrandra ireo mpikambana ary miantso ny fandraisan’andraikitr’ireo mpahay lalàna mandrafitra ny fitsarana avo momban’ny lalàm-panorenena mba hijery ny tombotsoa ambonin’ny firenena amin’ny fandaniana an’io lalàm-pifidianana io. Miantso ireo mpitandro filaminana ihany koa ny Ssm amin’ny hanaovan’izy ireo ny asany araka ny tokony ho izy, dia ny hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy ho lasa hery famoretana hampihorohoro vahoaka.
Mamofompofona krizy ny firenena, na ara-politika io na ara-tsosialy. Hafatra natsipin’ireo mpitarika eo anivon’ny firaisankinan’ny sendikan’ny mpiasa ho mpiasa malagasy ny mba hanarahan’izy ireo akaiky ny toe-draharaha misy eto amin’ny firenena sy ny mba handraisan’ny tsirairay ny andraikiny mifanandrify amin’izany. Iaraha-mahita fa ny mpiasa na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana no anisany mibaby ny voka-dratsin’ny korontana sy savorovoro misy eto amin’ny firenena.
Mitady ho very an-javony ny raharaha Mbola Rajaonah, Rolly, Fidèle FANAKORONTANANA FILAMINAM-BAHOAKA (296) 14 janvier 2019 Halefa eny amin’ny Fitsarana amin’izay ny dosien’i Mbola Rajaonah TALE JENERALIN’NY BIANCO (170) 17 janvier 2019 Nanamafy ny fanovana goavana hoentiny ny Filoha Rajoelina FANDRAISANA NY FITANTANANA NY FIRENENA (76) 20 janvier 2019 Tafakatra sivy ireo olona namoy ny ainy MAHAMASINA - FIHOTSAHANA TRANO (73) 20 janvier 2019 Rangahy iray 64 taona maty notetitetehina TSARAVANJA - ANTETEZAMBARO (56) 20 janvier 2019 Nahitana ombivavy bevohoka novonoin’olona AMPITOLOVA BELOBAKA MAHAJANGA (52) 20 janvier 2019